DAAWO: Kenya haddii ay ka baaqato Maxkamadda hor-tagideeda Soomaaliya guusha ma yeelanaysaa? – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: Kenya haddii ay ka baaqato Maxkamadda hor-tagideeda Soomaaliya guusha ma yeelanaysaa?
September 4, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 0
Haddii ay Soomaaliya si cad u diiday dalabka Kenya ee kuwajahan in dib loo dhigo dhageysiga Dacwadda badda ee furmaysa 9-ka bishan, waxay ka dhigan tahay in ay ka baaqsato, haddii ay baaqsatana waxaa ka dhalanaya xeerar kala duwan oo ay jabisay Kenya.
Sidda ku cad Dastuurka ama xeerka Maxkamadda Cadaaladda Aduunka qodobkii 153aad wuxuu dhigayaa in dacwadda la dhageysanayo, iyadoo uu maqan yahay garabka maqan ee dacwaddu kala dhaxaysay cidda joogta.
HALKAAN KA DAAWO FAAHFAAHIN
Dadka Soomaaliyeed ayaa ku foogan sidii ay u ogaan lahaayeen xaqiiqooyinka ku wajahan arrimahan, waxaana ay Soomaalidu ku qanacsan tahay xukun kasta oo ay gaarto maxkamaddaas, iyadoo ay dawladda Soomaaliya ku adkeystay marar badan.